भारतले कश्मीरमाथि उडाएको ‘जासूसी’ ड्रोन पाकिस्तानले खसाल्यो – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारतले कश्मीरमाथि उडाएको ‘जासूसी’ ड्रोन पाकिस्तानले खसाल्यो
भारतले कश्मीरमाथि उडाएको ‘जासूसी’ ड्रोन पाकिस्तानले खसाल्यो
504 Less thanaminute
इस्लामाबाद : कश्मीरको आकाशमा उडेको ड्रोनलाई भारतले जासूसीका लागि प्रयोग गरेको भन्दै पाकिस्तानले खसालिदिएको छ ।
सानो आकारको उक्त ड्रोन बुधबार विवादित हिमाली क्षेत्रको आकाशमा उडेको थियो । पाकिस्तानी सेनाले विज्ञप्ति निकाल्दै राखचिक्री सीमा क्षेत्रमा ड्रोन खसालेको जनाएको छ । त्यस क्षेत्र कश्मीरको प्रवेशद्वार मानिन्छ ।
भारतीय पक्षबाट भने यसबारे केही प्रतिक्रिया आएको छैन । भारत र पाकिस्तान दुबै देशले कश्मीरको यस भूभागलाई आफ्नो दावी गर्दैआएका छन् । गत वर्षको अगष्टदेखि भारत र पाकिस्तानबीच यस क्षेत्रमा थप तनाब बढेको छ ।
अघिल्लो साता मात्रै पाकिस्तानले जासूसीका लागि परेवा पठाएको भन्दै उक्त तालिम प्राप्त परेवालाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण गरेका थिए । कश्मीरकै विषयलाई लिएर पाकिस्तान र भारतले १९४७ पछि दुई वटा युद्ध लडिसकेका छन् ।
भान्साको ओखती बेसार : अनेक फाइदा
यी हुन पि,चास जस्ले यु,वतीको व,समै सा,मूहिक बला,त्का,र गरेँ
मनकारी ! नायिका एलिजा गौतम राहत बोकेर सिन्धुपाल्चोक जादै !!
बा,ढी र प,हिरोका कारण धादिङमा पृ,थ्वी राजमार्गको पुल भ,त्कियो